Mampiseho ny votoatin'ny AR Fahafaham-borona ny BTS World - NAB Show News avy amin'ny Broadcast Beat, Broadcast an'ny NAB Show - NAB Show LIVE
Home » News » Mampiseho ny votoatin'ny AR Fahafaham-borona ny BTS World
Mampiseho ny votoatin'ny AR Fahafaham-borona ny BTS World
- Ny fitsangatsanganana an-tserasera dia mampiasa vahaolana tsy manaitaitra sy fitaovana lozisialy manafina amin'ny votoatiny AR be indrindra -
Londres, UK, 9 Oktobra 2019 - Ny bandy zazalahy BTS dia nivarotra amboarampeo 15 tapitrisa eran-tany, ka mahatonga azy ireo ho mpanakanto lafo indrindra any Korea Atsimo amin'ny fotoana rehetra. Manohy ny fanjanian'izao tontolo izao ry zareo amin'ny alàlan'ny mpankafy mampientanentana eran'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny fitsidihan'izy ireo 'Tsidiho ny tenanao: lazao ny tenanao'.
Ny fitsangatsanganana 20 daty dia fanitarana ny kianjan'ny fizahan-dahatsoratry ny tarika nahomby izay nanomboka tao 2018 ary nahazo tsara tokoa, niaraka tamin'ny daty Londres London Wembley nivarotra tao anatin'ny roa minitra tapakila navoaka. Ny famokarana vaovao dia mampiasa mpizara media gx 2 hampandeha ny votoatin'ny horonantsary, mampiditra ny votoatiny malalaola ary manome votoaty AR.
Orinasa mitantana Big Hit Entertainment, talen'ny famoronana Plan A ary mpamorona famokarana FragmentNine dia nitodika ny fizahan-tany ho fetibe lehibe miaraka amin'ny hira tsirairay ao amin'ny lisitry ny lisitra natao mba hifandraisana amin'ireo mpankafy, fantatra amin'ny anarana hoe ARMY. Ny fampisehoana dia misy inflatable, tafondro rano, vovoka basy ary afomanga ary koa fandraisana anjara amin'ny mpihaino miaraka amina hazo ARMY BOMB. Ho an'ny hira "Trivia: Fitiavana" dia toe-tsaina mistery dia noforonina amin'ny fampiasana AR mivantana, voalohany ho an'ny fampisehoana mivantana.
LIVE-LAB Co., Ltd (Jiro sy Fanambarana Visual Expression) dia nanoro hevitra ny hampiala ny fizahan-tany ho an'ny fitsangatsanganana “noho ny fahaiza-manaony sy ny fiorenany amin'ny fiatrehana ny fiovana miova mandritra ny fitsidihana lava”, hoy ny Tale Jeneralin'ny Alvin Chu. LIVE-LAB dia mpiara-miasa amin'ny studio natao hanoto niorina ao Seoul.
Teraka tamin'ny resaka nifanaovan'ny Big Hit, Plan A, ary FragmentNine dia tonga ny hevitra hampiasa ny Refajinalina ho an'ny Trivia: Fitiavana. Ny ekipa dia nanana horonantsary fitantarana vitsivitsy izay mahatafintohina, saingy zara raha niditra tao amin'ny indostrian'ny fialamboly ny AR.
Niasa tamin'ny fampivadihana ireo hevitra napkin ho zava-misy ireo, FragmentNine, izay ahitana ny mpamorona fototra Jeremy Lechterman sy Jackson Gallagher, dia nanantona ireo mpiara-miasa aminy sy sakaizany hatrizay (AOIN) mba hanomboka hitrandraka ny mety.
Nandritra ny herinandro teo, maro ny hevitra nipoitra teo amin'ny rehetra mandra-pahatongan'ny farany ny fomba sy ny fitohizan'ny hira. Ny votoatin'ny AR dia misy ny teny sy ny endrika ary ny fihetsiky ny fony azon'ny mpanakanto mifanerasera.
Tamin'ny famerenam-pamokarana dia nanangana modely haingam-pandeha antsasaky ny sehatra i AOIN mba hizahana fakantsary AR sy hivezivezena amin'ny fihetsiketsehana satria tsy hevitra fotsiny afaka mivoaka avy eo amin'ny talantàlana izy io, fa mila niasa. Io dia nahafahan'i FragmentNine, Plan A, ary AOIN hanao fanavaozana ny atiny miaraka alohan'ny famerenany feno.
AOIN dia nasaina nampidirina AR tamin'ny kianja fizarana kianja tamin'ny alàlan'ny fakan-tsary sy ny horonan-tsary misy, izay tsy nisy firy kely akory. Ny fizahan-tany dia inoana fa izy no voalohany nampiasa AR tamin'ny fitsangatsanganana an-kianja multidate eran-tany.
"Ilaintsika ny manampy ny mpanakanto, ny fitantanana ary ny famokarana hahafantatra ny zavatra tafiditra ao amin'ny votoatin'ny AR sy ny fomba fijeriny," hoy ny fanazavan'i Kevin Zhu, iray amin'ireo Mpamorona ny ARIN'i AOIN. "Izy io dia nahitana fifanakalozan-dresaka marobe sy fampianarana momba ny mpanjifa momba ireo variana misy fiantraikany amin'ny vokatra farany: jiro, habe / habe, loko, fanoratana takelaka sy ny maro hafa. Ilaina io karazana fifanakalozan-kevitra io satria vaovao tamin'ny alàlan'ireo mpandray anjara lehibe ny teknolojia sy ny fampiharana ny sarisary AR. Tamin'ny farany, dia traikefa fianaràna tsara teo amin'ny manodidina izany, ary hoentinay any amina tetikasa vitsivitsy ny lesona sasany. ”
Amin'ny lafiny teknika, tsy maintsy nandresy ny tsy fantatra i AOIN miaraka amin'ny fampidirana ireo arofanina AR, fanamarihana momba ny mpamokatra sy AR Design Designer, Berto Mora. "Nanao fanandramana maro tao amin'ny studio izahay izay miasa amin'ny zava-drehetra mifehy ny zava-drehetra, fa rehefa eo an-toerana ianao dia mila miatrika ireo olana tena izy. Koa satria vaovao be dia be ny teknolojia ireo, tsy maintsy miatrika olana tsy fantatra sy endri-javatra tsy voasoratra isika. Ny fiarahana akaiky amin'ny mpiara-miasa aminay, toy ny fanilikilihana dia ahafahantsika manatanteraka izay ilaintsika mba hampandehanana ny atrik'asa miasa ao amin'ny tontolo tena izy. ”
Araka ny filazan'ny mpanatanteraka mpanatanteraka AOIN Danny Firpo, "ny fahatakarana ny fampisehoana tamin'ny kianja lehibe dia zava-dehibe. Ny haben'ny kianjan'ny kianja iray dia midika fa saika tsy dia nahita olona manokana ilay mpandray anjara afa-tsy ireo izay ao amin'ny laharana voalohany. Ny isan-jaton'ny mpijery dia hahita ny fampisehoana ary hijery ny mpandray anjara amin'ny alàlan'ny efijery IMAG miaraka amin'ny fiantraikany AR. ”
Ny alàlan'ny fidirana fiasa tsy manavaka dia ilaina amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra momba ny votoaty famoronana raha tsy efa napetraka ny arigaly AR feno. Nanazava i Firpo hoe: "Nampiasa sarin-tsarintany tao amin'ny gx 2 izahay, izay nahafahanay nanakana ny toerana rehetra misy ny fakantsary sy ny vokatry ny AR teo an-tsehatra avy ao anaty studio. Ny fitantanana dia mety hanaiky ny fanovana sy ny fanitsiana matetika amin'ny alàlan'ny fijerena ny sarimihetsika fanilikilihana ho toy ny proxy virtoaly amin'ny tena fampisehoana. ”
Ny fampifangaroana tsy marina amin'ny rafitra fanaraha-maso an'ny fakan-tsary stYpe dia mamela an'i AOIN mampifandray ireo fakantsary virtoaly amin'ny alàlan'ny rindrambaiko GUI amin'ny alàlan'ny lensa misy ny fotoana sy ny angona 6D salanisan'ny tarika stYpe azo avy amin'ny fakantsary sy ny famoahana ny fandefasana. Ny rafitra Redspy an'i stYpe dia nampiasaina ho an'ny fakantsary finday, ary ny loha lohan'ny Vinten Tracking dia ampiasaina ho fanenjehana ny fakantsary tsy misy haingam-pandeha amin'ny toerana misy ny fakantsary FOH.
"Mila manao zotra sehatra virtoaly izahay amin'ny fomba tena izy, ary afaka nahita io firaketana io tamin'ny alàlan'ny famahanana fakan-tsary mivantana tao amin'ny gx 2," hoy ny fanazavan'ilay Touring AR Engineer Neil Carman. “Koa ny fanakorontanana dia lasa fitaovana tena fanamboarana tena matanjaka izay nanampy anay hahatakatra ny fanitsiana ilaintsika mba hanaovana fomba fijery sy toerana. Ny fananana sehatra virtoaly izay natolotr'i FragmentNine ho anay amin'ity tetikasa ity dia nosedraina tanteraka ho an'ny toerana tena izy. Mahavita manamarina ny tontolon'ny rindrambaiko diso izay mampifanaraka ny tena tontolo sy ny tontolo virtoaly. "
Vantany vao manaiky ny rafitra Stype misy ifandraisany dia mifototra amin'ny teboka iraisan'ny rehetra, avy eo ny sary rehetra, dia avelan'ny mpizara mivezivezy tsara ny fizotran'ny sarin-tsary tsirairay avy amin'ny fizarana samihafa isaky ny famerimberina ireo famerenana. Nanampy an'i AOIN izany tamin'ny hetsika fampifandraisana an-tsary teo anelanelan'ireo mpilalao sy sary. "Ny fahamarinan'ny lozisialy sy ny hajan'ny rindrambaiko ao amin'ny mpizara mpizara dia mitondra anjara betsaka amin'ny fahombiazan'ny fitsangatsanganana lavitra", hoy ny Chu's LIVE-LAB.
"Ny fanaraha-maso ny sary tarihina eo amin'ny takelaka LED lehibe dia zava-dehibe amin'ny firindran'ny ankapobeny amin'ireo singa, ary ny fanilikilihana dia mampiseho fahaiza-miasa maharitra sy matanjaka," hoy ny talen'ny Creative Commons Kevin Kim an'ny Plan A.
Jackson Gallagher sy Jeremy Lechterman no mpamorona famokarana fitsangatsanganana avy any FragmentNine.
ny sehatra teknolojia diso matihanina sy matihanina matihanina alao sary an-tsaina, mamorona ary mampita traikefa mivantana amin'ny sary avo lenta.
Miaraka amin'ny fifantohana amin'ny fampifangaroana rindrambaiko mifototra amin'ny 3D tena misy azy amin'ny haino aman-jery mahery sy fitaovana matanjaka, izy ireo no ahafahan'izy ireo mampiditra tetikasa famoronana feno fanamby amin'ny fahatokisana sy amim-pahatokisana.
Ny fanovana ny foto-kevitra ho toy ny zava-misy, ny fanilikilihana dia manana birao London, Hong Kong, New York, Los Angeles ary Shanghai, miaraka amin'ireo ekipa teknika manerana ny rehetra mba hanohanana ny filan'ny mpanjifa, ary koa ny varotra voarakitra ao amin'ireo firenena 50.
Miaraka amin'ny tambajotra mpiara-miombon'antoka manerantany ary miasa miaraka amina mpanaingo sy ekipa ara-teknolojia manampahaizana indrindra manerantany ny fitsidihana ho an'ny mpanakanto, ao anatin'izany ny U2, ny The Rolling Stones, Beyoncé, Pink! sy Ed Sheeran, hetsika mivantana, ao anatin'izany ny Coachella sy ny Festival Iraisam-pirenena any Moskoa famokarana teatra toa an'i Frozen sy Harry Potter ary koa ny fitomboan'ny sarimihetsika, fandaharana mivantana amin'ny fahitalavitra, hetsika orinasa sy fialamboly - ny fanilikilihana dia manangana fitaovam-piaraha-miasa ho an'ny taranaka manaraka hanampiana ny mpanakanto sy ny teknolojia hahatsapa ny fahitany.
augmented zava-misy mampitombo ny zavamisy (AR) Concert Hody olon-kafa fampidirana live event A / V Media Server Spears & Arrows TVU Networks Ultra HD Forum Video injeniera	2019-10-09
Previous: Post Goldcrest sy Mpanolotsaina CinePointe hametraka atrikasa momba ny fandefasana sarimihetsika
Next: Ny CCTV dia mandeha ao amin'ny hazakazaka amin'ny sambo Dragon miaraka amin'ny Lectrosonics nomerika Hybrid Wireless